Wararka - Codsiga nuuradda degdegga ah
Codsiga liin dhaqso ah
QUICKLIME waxaa laga soosaaraa nuuradda oo ka kooban isku dar ah kalsiyum iyo magnesium carbonates labadaba.
Labada kalsiyum ee dheereeya iyo dolomitic quicklime waxaa lagu soo saaray iyadoo lagu kululeynayo dhigaalka nuuradda ceeriin ee ceelka ceelka ku jira ilaa heerkulka 900 darajo. Nidaamkan waxaa loo yaqaan 'calcination process'.
Waxyaabaha lagu dheereeyo waqtiga degdega ah badiyaa waxaa lagu galiyaa awood wanaagsan oo loo yaqaan 'PULVERIZED QUICKLIME' oo ku habboon in lagu daro waxyaabo lagu daro ama waxyaabo kale si loo helo iskudhaf isku dhafan oo khaas ah. Dabeecadda kiimikada ee lagu daro qaar ka mid ah, xawaaraha degdega ah wuxuu noqon karaa "Fluidized", taas oo ah, lahaanshaha astaamo aad u dheecaan badan. Xawaaraha dheecaanka leh ee dheecaanka leh ayaa ku habboon in loo isticmaalo nidaamyada maareynta maaddooyinka gaarka ah ee qulqulka ugu fiican iyo in laga fogaado xiritaanka.
Quicklime sidoo kale waxaa lagu waraabin karaa biyo, geedi socodka badanaa loo yaqaan 'slaking', taasoo keentay HYDRATED QUICKLIME (ama kalsiyum hydroxide), badeecad boodh qulqulaya oo bilaash ah oo wax ku ool ah oo wax ku ool u ah adeegsiyo badan.
Waxa kale oo loo isticmaali karaa inay noqdaan reagent falanqaynta, reagent falanqaynta spectral, farsamo phosphor. Dareeraha kaaliyaha, wakiilada qurxinta saliidda cuntada, falanqaynta gaaska, ee loo isticmaalo nuugista kaarboon dioxide. Waxyaabaha loo yaqaan 'reagents' badan ayaa loo isticmaalay soosaarka semiconductor ee qeexitaanka, iyo habka faafinta.
1) U isticmaal nooc kasta oo quudin ku darista tirooyinka daryeela ee gaaraya 55.6 ee kor ku xusan oo aan ka ahayn waxyaabaha diidmada leh
2) Waxay ka dhigeysaa warshad caag ah, warshad caag ah, warshadda daahan, alaabta ceyriinka ah ee keydka bakhaarka biyaha iyo derbiyada gudaha iyo dibaddaba makiinado. Albedo oo ka sarreeya 85 darajo.
3) Wuxuu adeegsadaa sameynta suumanka sabuuradda, wuxuu ku dhacaa biyaha dhuumaha, warshadaha kiimikada. Albedo oo ka sarreysa 93 digrii.
4) Waxaa suuragal ah in loo isticmaalo jirka jirka ee koollada cadayga, saabuunta. Albedo oo ku jira shahaadada 94 ee kor ku xusan
5) Wuxuu ku isticmaalaa cinjirka, balaastigga, fiilada korantada, pvc albedo ee 94 darajo ka sareysa
6) PCV, PE, rinjiga, waxsoosaarka heerka waxsoosaarka, hoosta waraaqaha sameynta ayaa ku faafaya, dusha xaashida ayaa ku fida, albedo oo ka sareysa 95 darajo. Miyuu leeyahay, albedo sare, oo aan sun lahayn, ur la’aanta, maaddada saliidda ee khafiifka ah si ay u ahaato mid hooseeya oo nadiif ah, heerka adkaanta ayaa hooseeya.
Kaalshiyamka Kaalshiyamka iyo Kaalshiyamka hydroxide, Sameynta Kaalshiyamka Hydroxide, Magaca Ganacsiga ee Kaalshiyamka Kaalshiyamka, Qalabka Kaalsiyam Hydrokside, Qalabka Khadka Kaalsiyam Hydrokside Line, Sameynta Kaalshiyamka Hydroxide,